ကောင်တာသပိတ် ၁.၆ Free Download:
Counter-Strike 1.6 ၎င်းသည်စွန့်စားမှုနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်တို့နှင့်ပြည့်နေသောကြောင့်စိမ်းလန်းသောကမ္ဘာမြေတွင်လူကြိုက်အများဆုံး၊ ပျော်ရွှင်စရာနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် download လုပ်သူတိုင်း၏အိပ်မက်ဖြစ်သည် CS 1.6 သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာတွေမှာအခမဲ့သုံးပြီးစစ်တိုက်ပါ။ အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်သောဖိုင်အမျိုးအစားမျိုးစုံမှအခမဲ့သင့်တော်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက် CS 1.6 ၎င်းသည်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ သင်ကဂိမ်းကစားတာကို ၀ ါသနာပါတယ်ဆိုရင် counter-strike 1.6 free download ကိုရှာလျှင်သင်သည်နေရာမှန်၌ရှိနေသည်။ အခမဲ့ download များရှာဖွေရန်ဤနေရာသို့သွားရန်မလိုအပ်ပါ CS 1.6မရ။ ငါတို့သည်သင် download လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများကိုပေးခဲ့သည် CS 1.6 အခမဲ့။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဗားရှင်းအားလုံးကိုသင်အလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်သည် Counter-strike 1.6 အလကား။ ဟုတ်သည်၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကိုတိုက်ရိုက် download လုပ်ရန်သာလိုသည် CS 1.6 အပေါ်မှ download ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်အပြင်အဆင်ကို ၀ ယ်ရန်ငွေမဖြုန်းဘဲဂိမ်းကိုခံစားပါ CS 1.6 သို့မဟုတ်ကစားသူအများအပြား CS 1.6 download အခမဲ့ရနိုင်သောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုသင်တွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အများစုသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် junk ဖိုင်များနှင့်ရှုပ်ထွေးသော download နည်းလမ်းများရှိသည်။ ဤစာမျက်နှာ၌ CS 1.6 ဂိမ်း၏မူရင်းမိတ္တူနှင့်၎င်းကိုသင်၏ PC သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။ ငါတို့ကမလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေကိုဖယ်ပြီးမင်းအတွက်ရိုးရှင်းလွယ်ကူအောင် CS 1.6 ရဲ့အရွယ်အစားကိုလျှော့ချခဲ့တာကြောင့်မင်းရဲ့ PC ဒါမှမဟုတ်ဂိမ်းကိုထိခိုက်စေမယ့်နောက်ထပ်ဖိုင်တွေ၊ ပရိုဂရမ်တွေမရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်သာမက CS 1.6 အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ငါတို့သည်ဤဂိမ်းအသစ်သို့ကစားသူအသစ်များသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းလမ်းညွှန်ပေးခဲ့သည် Counter-strike 1.6မရ။ ငါတို့ကမင်းအတွက်အလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်ဖို့ csdownload.net ဆိုတဲ့ web page တစ်ခုကိုငါတို့ဖန်တီးပြီးပြီ CS 1.6 ဂိမ်းကိုသင်၏ PC သို့မည်သို့ download လုပ်ပုံ၊ ၎င်းကိုမည်သို့ထည့်သွင်းပုံ၊ မည်သို့ကစားရမည်ကိုလေ့လာပါ CS 1.6.
ငါတို့သည်သင်၏ download၊ အခမဲ့ရေနွေးငွေ့မဟုတ်သောဗားရှင်းကိုပေးသည် CS 1.6 အလွန်လျင်မြန်သော download speed၊ နောက်ဆုံးပေါ် compressions နှင့် instillation algorithms များပါ ၀ င်သည်။ သင် download လုပ်ပြီး install လုပ်နိုင်လိမ့်မည် CS 1.6 အားနည်းချက်များ၊ အမှားများ (သို့) ဂိမ်း၏ဤဝက်ဘ်စာမျက်နှာရှိဂိမ်းအားလုံး (Windows XP (7, 8, 8.1, 10) အတွက်အဆင်ပြေလွယ်ကူမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးပါ ၀ င်သောဗားရှင်းများနှင့်ဗားရှင်းအားလုံး
သင်ဂိမ်းကို download လုပ်လိုလျှင် Counter-Strike 1.6 အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ မည်သို့ download လုပ်ရမည်ကိုသင်မသိပါ CS 1.6 မင်းရဲ့ PC မှာမင်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဆိုတာထက်ငါတို့ကမင်းကိုကူညီဖို့ဒီမှာ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဂိမ်း download အခမဲ့ဗားရှင်းအပြည့်ပေးသည် CS 1.6မရ။ ငါတို့သည်သင့်အားအလုပ်လုပ်နိုင်သော download link တစ်ခုပေးထားသည် CS 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှ၎င်းကိုသင် download လုပ်နိုင်ရန်ဤ website တွင် download လုပ်ပါ။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်တင်သည် CS 1.6သင်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူသောအဆင့်များအတိုင်းလိုက်ရန်သာလိုအပ်သည်။ အခမဲ့ download လုပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုသင်နားလည်နိုင်ရန်အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ CS 1.6
အခမဲ့ download ခလုတ်ကိုအခမဲ့နှိပ်ပါ Counter-Strike 1.6အထက်တွင်ပေးထားသော၊
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည် CS 1.6 website မှသင်၏ကွန်ပျူတာသို့ download speed သည် internet speed ပေါ်မူတည်သည်။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနောက် CS 1.6configuration ကို download လုပ်ထားသော folder သို့သွားပါ
ကိုနှိပ်ပါ CS 1.6 ၎င်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ပါ။
တပ်ဆင်မှုအဆင့်အပြီးတွင် Finish ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
အရင်တုန်းကလူတွေဟာဒေါင်းလုပ်တွေအတွက်ငွေပေးရတယ် Counter-Strikeယခုမူ၎င်းကိုချွင်းချက်မရှိဘဲ download လုပ်ပြီးကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်အခမဲ့ download လုပ်ရန်ကမ်းလှမ်းသည် CS 1.6; ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပထမ ဦး ဆုံးသေနတ်သမားအမျိုးအစားဂိမ်း၏မည်သည့်ဗားရှင်းနှင့်မဆိုအလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်သည်။ သင်အပါအဝင်ကွဲပြားသောဗားရှင်းများကိုရှာဖွေနေသည် Counter-Strike 1.6 CSGO စာစောင်၊ Counter-Strike: ဟယ်လိုမုဒ်၊ CS 1.6 မူရင်းဗားရှင်း၊ CS 1.6: PROCS RAR ဗားရှင်း၊ CS 1.6: XTCS ဗားရှင်း၊ Counter-Strike 1.6 ခေတ်သစ်ပုံစံ (သို့) အခြားဗားရှင်း (သို့) ထုတ်ဝေမှု၊ သင်သည်ဤ web page မှအကန့်အသတ်နှင့်အခြားအဆင်မပြေမှုများမပါဘဲ၎င်းကို download လုပ်နိုင်သည်။ အခမဲ့ download ခလုတ်၏မည်သည့်ဗားရှင်းကိုမဆိုနှိပ်ပါ CS 1.6 မင်းရဲ့ PC မှာ game တစ်ခုရဖို့ဒီ web page မှာ malicious script များနှင့် files များမှအစွမ်းထက်ကာကွယ်မှုကိုအခမဲ့ download လုပ်ချင်တယ်။
ဗားရှင်းအားလုံး Counter-Strike (CS 1.6 Warzone၊ CS 1.6 မူရင်း၊ XTCS နောက်ဆုံး၊ CS: GO mod၊ Source edition စသည်) Window 95, Window 98, Window 2000, Window 7, Window 8, Window 8.1, Window XP, Window 10 စသည့် Microsoft ဗားရှင်းအားလုံးနှင့်တွက်ချက်နိုင်သည်။ သင်သည် Window မှလွဲ၍ အခြား operating system ကိုသုံးနေပါကဂိမ်းကိုခံစားရန်နှင့်ဂိမ်းအတွင်းမည်သည့်အမှားသို့မဟုတ်အနှောင့်အယှက်ကိုမဆိုရှောင်ရှားရန် Microsoft Windows သို့ပြောင်းရန်အကြံပြုသည်။ မင်းရဲ့ PC မှာ Microsoft operating system ရှိပြီးသားဆိုရင်မစောင့်တော့ဘူး၊ download လုပ်ဖို့ link ခလုတ်ကိုသွားပါ Counter-Strike 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်အခမဲ့ ရယူ၍ သင်၏ CS: 1.6 ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ။
အနည်းဆုံး system လိုအပ်ချက်များa။ အခမဲ့ download လုပ်ပြီးကစားရန် CS 1.6:
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ CS 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှအခမဲ့၊ ဂိမ်းကစားရန်သင်၏ကွန်ပျူတာမှအကြံပြုထားသောအနည်းဆုံးစနစ်လိုအပ်ချက်များကိုသင်သိထားရပါမည် Counter-Strike 1.6မရ။ သင်၏ကွန်ပျူတာစနစ်သည်ဂိမ်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်တွက်ချက်နိုင်သည် CS 1.6 မည်သည့်နှောင့်နှေးမှုနှင့်အနှောင့်အယှက်မှမရှိဘဲကစားပါ။ သင်မသိလျှင်ဂိမ်းအခမဲ့တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုပါ Counter-Strike 1.6 သင်၏ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်အနည်းဆုံးလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောဂရပ်ဖစ်ကတ်များနှင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏ထူးခြားသောသတ်မှတ်ချက်များလိုအပ်သောလေးလံသောဂိမ်းမဟုတ်ပါ။ .exe ဖိုင်အရွယ်အစား CS 1.6 သင့်ကွန်ပျူတာ၏ hard drive 250MB သာလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်ပြီး၎င်းသည်သင်အခမဲ့ download လုပ်သောအခါသင်၏ကွန်ပျူတာ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တိုးတက်မှုကိုမထိခိုက်စေပါ Counter-Strike 1.6 သင်၏ PC ၌ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဒေါင်းလုပ်မချမီကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုသိရန်အရေးကြီးသည် CS 1.6 အလကား။ ကစားပြီးပြီဆိုရင် CS 1.6 သင်၏ကွန်ပျူတာ၌နှောင့်နှေးမှုမရှိပါ၊ သင်၏ကွန်ပျူတာ၌အနည်းဆုံးလိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိပြီးသင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နှင့်ကစားရန်အခက်အခဲရှိနေပြီဟုဆိုလိုသည်။ CS 1.6 သင်၏ PC သည်အခမဲ့ download ပြုလုပ်နိုင်ရန်တွက်ချက်ရန်အောက်ပါလိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ဆေးသင့်သည် CS 1.6 သို့မဟုတ်နည်းသည်။ ကွန်ပျူတာအတွက်အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များ CS 1.6 CPU: 0,8 GHz, အခမဲ့ hard disk drive - 650 MB, random access memory (RAM) - 128 MB
သင် download လုပ်ပြီးကစားရန်အင်တာနက်လိုင်းကောင်းကောင်းရှိရန်လိုအပ်သည် CS 1.6 ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ
ဂိမ်းတွင်ပျော်မွေ့ရန်သင်၏ကွန်ပျူတာတွင် RAM 512MB (သို့) ထိုထက်မကရှိသင့်သည်။
သင့်ကွန်ပျူတာတွင်အနည်းဆုံး 750MB hard drive ရှိရန်လိုအပ်သည်
128 MB ဗီဒီယိုကဒ်ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာထားရမယ်
မျိုးပွားရန် CS 1.6 mouse နှင့် keyboard တို့လိုအပ်သည်၊ သို့သော် microphone ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်
အတွေ့အကြုံကောင်းရှိဖို့ CS 1.6သင်၌ Microsoft Windows operating system တစ်ခုခုရှိရန်လိုအပ်သည်။
အစပိုင်းတွင်၎င်းသည်ပထမဆုံးဖြန့်ချိသောအခါအခမဲ့ download လုပ်၏ CS 1.6 လူထုအတွက်မရနိုင်ပါ၊ သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ developer များတိုးတက်လာသည် Counter-Strike 1.6 သူတို့သည်အခမဲ့ 1.6 non-steam game config file ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ယခုသင်အခမဲ့ကစားနိုင်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုသင်တွေ့နိုင်သည် CS 1.6မရ။ CS game ချစ်သူများအတွက်သူတို့အလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်သော website တစ်ခုကိုရှာရန်မှာခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည် Counter-Strike 1.6 အန္တရာယ်ရှိသောဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဖိုင်များ၊ ချိတ်များ၊ ကြော်ငြာများသို့မဟုတ်အခြားမလိုအပ်သောဖိုင်များမပါဘဲအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင် download ဆွဲရန်ပြီးပြည့်စုံသော webpage ကိုသင်ရှာရပါမည် Counter-Strike 1.6မရ။ website အများစုသည်အခမဲ့ download လုပ်ကြသည် Counter-Strike 1.6 ဖွင့်ခြင်းတိုးတက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေရုံသာမကမလိုအပ်သောဖိုင်အမျိုးအစားမျိုးစုံရှိသည် CS 1.6သို့ရာတွင်၎င်းတို့သည်အန္တရာယ်ရှိသောဗိုင်းရပ်စ်များကြောင့်စနစ်အပေါ်အန္တရာယ်သက်ရောက်မှုများရှိသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွင် https://csdownload.net,နောက်ဆုံးပေါ် CS download 1.6 install file ကိုအခမဲ့သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် link တစ်ခုပေးထားသည် CS 1.6 သင့်အတွက်၎င်းသည်အလွန်အကာအကွယ်ရှိပြီးအန္တရာယ်ရှိသောဖိုင်အားလုံးကင်းစင်သည်။ အမှုသည် CS 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏ website ၏လူသိနည်းသောနှေးကွေးသော hacking နည်းလမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website csdownload.net မှသင် download လုပ်နိုင်သည် CS 1.6 အန္တရာယ်ရှိသောဖိုင်များ၊ script များနှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းကိုအစွမ်းထက်သောကာကွယ်မှုဖြင့် Counter-Strike ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာမှတိုက်ခိုက်ပါကမည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်မှမကူးစက်နိုင်ပါ။
ထို့ပြင်သင်ထုတ်ဝေသောအဟောင်းနှင့်အသစ်ထုတ်ဝေမှုအားလုံးကိုသင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည် Counter-Strike 1.6 ဒီ website ကနေ ထုတ်ဝေမှုအသစ် Counter-Strike 1.6 XTCS ဗားရှင်း၊ Counter-Strike 1.6: မူရင်းဗားရှင်း၊ Counter-Strike 1.6 PROCS ဗားရှင်း၊ CS: GO Edition စသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ရနိုင်သည်။ ဒီ website မှာကောင်းတဲ့ link တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာနိုင်တယ်။ သင်တကယ်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေတယ်ဆိုရင် cs 1.6 မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? ပေးထားသော CS အခမဲ့ download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ဂိမ်းကို download လုပ်ပြီးသူငယ်ချင်းများနှင့်သူစိမ်းများနှင့်ကစားခြင်းကိုပျော်မွေ့ပါ။
CS 1.6 သည် CS ဂိမ်းကိုအဘယ်ကြောင့်လူကြိုက်အများဆုံး download လုပ်တာလဲသိလား။
ဗားရှင်း CS 1.6 di Counter-Strike ၎င်းသည်ယခင်ဗားရှင်းထက်ထူးခြား။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သောကြောင့်လူကြိုက်များသည် Counter-Strikeမရ။ ဤဗားရှင်း Counter-Strike ၎င်းကိုကစားသမားများ၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သာမန်လူထုအတွက်ပရိုဂရမ်မာများကအထူးပြုလုပ်ထားသည်။ Counter Strike multiplayer နှင့် single player modes နှစ်ခုလုံးရှိသည်။ developer များသည် shimmering tactical shield, Scope Snipers နှင့် backend updates များစွာပါ ၀ င်သောဗားရှင်းအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ကစားသူများသည်ဓား၊ သေနတ်များ၊ ကိုယ်ထည်သံချပ်ကာများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများ၊ စက်သေနတ်များနှင့်ဗုံးရှင်းလင်းရေးပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်များရနိုင်သည်။ CS 1.6မရ။ ကစားသမားများသည်ဂိမ်း၏လိုအပ်ချက်များအရကစားခြင်းနှင့်လက်နက်များ ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေရနိုင်သည်။ ဤလက်နက်များသည်တကယ့်စစ်ဆင်ရေးများတွင်သုံးသောတကယ့်လက်နက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤလက်နက်များသည်ခိုင်မာပြီးကစားသမားများကိုဆွဲဆောင်သည်။
ဗားရှင်းအသစ်များ Counter-Strike သူတို့မှာအရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်၊ စံပြပုံစံကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့တက်ကြွတဲ့အသံတွေရှိတယ်။ ၏မြေပုံများ CS 1.6 သူတို့သည်အခြားဂိမ်းဗားရှင်းများထက်အလွန်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးတိုးတက်လာသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ၊ CS 1.6 ဆေးများသည်လေးလံသောကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များပါသောမည်သည့်ကွန်ပျူတာစနစ်မဆိုဂိမ်းကိုအလွယ်တကူသုံးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Microsoft Windows Versions ဗားရှင်းအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Counter-Strike သူတို့ကသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘ ၀ ပြဿနာတွေကိုမေ့ပစ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေတွေကနေကစားပွဲကမ္ဘာရဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုရွှေ့ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကြားမှာလည်းနာမည်ကြီးလာတယ်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကစားပါ CS 1.6 သူငယ်ချင်းများနှင့်သူစိမ်းများနှင့်အတူအပျက်သဘောအတွေးများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးသူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်စရာအခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဘာသာပြန်ဂိမ်းနှင့်စကားပြောကစားသူများသည်ဒဏ္legendaryာရီဆန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုခံစားရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။
ထို့ကြောင့်၎င်း၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များကြောင့် CS သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လူကြိုက်များမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးသူတို့၏အားလပ်ချိန်များတွင်ဤဂိမ်းကိုကစားရန်နှစ်သက်သည်။ download လုပ်ရန်လုံးဝလုံခြုံသော link ကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ဤနေရာတွင်ရှိသည် CS 1.6 အခမဲ့။
ဒီမှာဖြစ်နိုင်တယ် scaricare အဆိုပါတန်ပြန် 1.6 အခမဲ့
ဤစာမျက်နှာတွင်သင် download လုပ်နိုင်သည် cs 1.6 VERSION di တပ်ဆင်ခြင်း ပြည့်သော။ ၎င်းသည်အခမဲ့ရရှိနိုင်သည် download, အဆိုပါ XTCS ဗားရှင်း၏ ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် -သပိတ်မှောက် 1.6 မရ။ XTCS 1.6 Final Release 2011 သည်နောက်ဆုံးနှင့်ခေတ်သစ်ဗားရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Counter Strike 1.6မရ။ ဤဗားရှင်းအသစ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံစံ၊ ပိုမိုသွက်လက်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများနှင့်အသံများပါ ၀ င်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်များကြောင့်ဂိမ်းသည်ယခင်ဗားရှင်းများထက်များစွာပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်သည် CS 1.6မရ။ ဤနေရာတွင်ဂိမ်းသည် Windows တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့၎င်းသည် Windows ဗားရှင်းအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Counter Strike ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်လူသိများသောသေနတ်ပစ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ CS တွင်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများ၊ မြေပုံများနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်များပါရှိပြီး၎င်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအွန်လိုင်းပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးကစားသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ အဲဒါကြောင့်ပါ တန်ပြန်သပိတ်မှောက် nessuna မြန်နှုန်း download, ရေနွေးငွေ့နေဆဲမြင့်မားသည်
၁.၆ တပ်ဆင်ခြင်းဖိုင်အား download လုပ်ရန် link ကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည် counter-strike မရ။ သို့သော်ဤ PC တန်ပြန်သပိတ်မှဒေါင်းလုပ်များတွင်မြေပုံများ၊ အသံများသို့မဟုတ်အခြားအပိုတပ်ဆင်မှုများမပါဝင်ပါ။
သင် download လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကောင်တာ သပိတ် 1,6 အခမဲ့အဘို့, လိုက်နာပါ ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များ -
ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာတွင်ခလုတ်တစ်ခုရှိသည် ဒေါင်းလုပ် ကောင်တာများအခမဲ့ သပိတ် 6
ကိုနှိပ်ပါ download, cs6င စတင်ရန်ascaricare
Download လုပ် strike counter ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာတွင်တပ်ဆင်ခြင်းဖိုင်ကိုမသိမ်းမှီမိနစ်အနည်းငယ်ခန့်သာယူလိမ့်မည် (သင်၏အင်တာနက်အမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်၍)
setup (setup) ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး setup counter ကိုဖြည့်ပါ
တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းပြီးဆုံးပြီးနောက်သင်၏ desktop ပေါ်ရှိ counter-strike game shortcut ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး cs6ကိုစတင်ကစားပါ
မွတ္စု: cs installation ဖိုင်နှင့်အတူဘရောက်ဇာတွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းထားသောအပိုပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ် application များမရှိပါ။ ၎င်းသည်အခြားမလိုအပ်သော application များမရှိသောရိုးရှင်းသောတိုက်ရိုက် download link တစ်ခုဖြစ်သည်။
Counter -Strike ၁.၆ ထည့်သွင်းခြင်းဖိုင်သည်ဂိမ်းအပြောင်းအလဲများမှကာကွယ်ရန်၊ ဂိမ်းကစားသူများ၏ဆာဗာများကိုရှာရန် singleplayer game mode အတွက် bot (CPU player) ရှိပြီး browser server အလုပ်လုပ်သည်။ ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် download, ပြတင်းပေါက် 10 ၎င်းသည်အရည်အသွေးမြင့် cs 1.6 ဗားရှင်း ဖြစ်၍ ပြproblemsနာများ (သို့) အမှားအယွင်းများမရှိပါ။
မှတ်စု: သင် download လုပ်နိုင်သည် ကောင်တာ သပိတ် 1.6 download, PC အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ သင်ပြုလုပ်ပါကသင်သည်မူလဂိမ်းမိတ္တူနှင့်ဤမိတ္တူရှိသည်ဟုဆိုကြသည် download, မဟုတ်တဲ့ ရနှေးငှေ့ ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် မျှဝေသည် del del download လုပ်ပါ ကောင်တာ pc နှုန်း အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၎င်းသည်မမှန်ပါ။
နှုန်း ဒီ ဂိမ်း,သဟဇာတစနစ်လိုအပ်ချက်များကိုအကြံပြုထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးသောစနစ်များမှာ windows 10, windows 8 ဖြစ်သည် o 8.1, 7, XP နှင့် 2000, ME, 98, 95 သောကြောင့် download, ပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်း ကောင်တာမှာ သပိတ်သူတို့အပေါ်မှာအလွယ်တကူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
cs တပ်ဆင်မှုအတွက်အခြားအရေးပါသော OS လိုအပ်ချက်များ -
CPU clock speed, 1200 GHz clock rate or
MicrosoftWindows operating system ဗားရှင်း - ၁၀၊ ၈၊ ၇၊ Vista၊ XP, 10, 8 -
Mouse နှင့် keyboard တို့ရှိရမည်။ ထို့အပြင်မိုက်ကရိုဖုန်းလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်
ဒီစာပိုဒ်မှာ CS ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုငါပြောလိမ့်မယ်။ Counter strike သည် ၁၉၉၉ တွင် Minh "Gooseman" Le နှင့် Jess Cliffe တို့၏တစ်ဝက်ဘဝပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအဖြစ်ပထမ ဦး ဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သောပထမဆုံးလူပစ်သေနတ်သမားဂိမ်းဖြစ်သည်။ Counter-Strike Microsoft Windows platform တွင် Valve ကဖြန့်ချိခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲဒီဂိမ်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ပထမ ဦး စွာဤသည်လျင်မြန်သော၊ အဖွဲ့လိုက် ဦး တည်သောအွန်လိုင်းဂိမ်းဖြစ်ပြီးကစားသမားများသည်အကြမ်းဖက်သမားများသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်သမားများကိုတန်ပြန်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နှစ်သင်းစလုံးသည်အနိုင်မရမချင်းအပြန်အလှန်တိုက်စစ်ဆင်ကစားကြသည်။ ရန်သူအဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုသတ်ရန်စီမံသောအဖွဲ့သည်အနိုင်ရသူဖြစ်လာသည်။ ဒုတိယအချက်မှာကစားရန်အခြေအနေများစွာရှိသည် Counter-Strikeလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဓားစာခံကယ်ဆယ်ရေးeဗုံးရှင်းလင်းခြင်း။
ထို့အပြင် Game တွင်မြို့ပြ၊ အာတိတ်၊ တောနက်နှင့်သဲကန္တာရကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုး၌နေရာယူသောကွဲပြားသောမြေပုံများစွာရှိသည်။ ဒါကကစားသမားတွေကိုသူတို့ကစားချင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကိုရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးတယ်။ သို့သော်လွှတ်ပေးပြီးကတည်းကဖြစ်သည် Counter-Strike 1.6ဂိမ်းများမှမြေပုံများကိုထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းမပြုလုပ်ပါ။
ကစားသမားသည်ဂိမ်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လက်နက်အမျိုးမျိုးမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကစားသမားများသည်ဓားမှသည်သေနတ်များနှင့်စက်သေနတ်များအထိအမျိုးမျိုးသောလက်နက်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ လက်နက်ရွေးချယ်ရာတွင်ကစားသမားသည်လက်နက်များမည်မျှကျေနပ်ရောင့်ရဲသည်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားသင့်သည်။ လက်နက်ရွေးချယ်ရန်အခြားအကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းသည်ကြည့်ကောင်းသည် (သို့) အေးလွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားစံသတ်မှတ်ချက်များမှာလက်တွေ့ဘ ၀ စစ်ပွဲအခြေအနေတွင်မည်သည့်လက်နက်များကိုအသုံးပြုမည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်သရုပ်မှန်ဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်အပေါ် CS 1.6
နောက်ဆုံး counter strike ဗားရှင်းများအနက်၊ Counter-Strike 1.6ဂိမ်းသည်အဓိကအကြောင်းအရာအဆင့်မြှင့်တင်မှုဖြစ်ပြီးဗားရှင်းနံပါတ်သည်ယခုအခါလူကြိုက်များပြီးမူလစီးရီး၏ကျန်စီးရီးများနှင့်ကွဲပြားစေရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီမှာအလွယ်တကူဒေါင်းနိုင်ပါတယ် una စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှု di gioco နှုန်း pc ဂိမ်းကိုသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပါ။
ယခုအချိန်တွင် CS 1.6 သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသိများဆုံး CS ဂိမ်းဗားရှင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပြီးနိုင်ငံအသီးသီးမှလူတို့တွင်အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။ ယခုပင်လူများသည်ဤဂိမ်း၏ပြိုင်ပွဲများကိုစီစဉ်ကြသည်။ ဒီမှာ https://www.game.tv/find-tournaments/- မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။counter-strikeပြိုင်ပွဲကြီး -၁.၆
ဆာဗာများသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ဝန်ချိန်တိုးတက်မှု
ကတည်းက Counter Strike 1.6 ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အပြောင်းအလဲများစွာနှင့်ဗားရှင်းအသစ်များစွာရှိသည်။ ဂိမ်း၏ဂရပ်ဖစ်များ၊ ချို့ယွင်းမှုများနှင့်အခြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစိတ်အပိုင်းများသည်၎င်း၏ကျော်ကြားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဗားရှင်းအသစ်များသို့ပုံမှန်လည်ပတ်သည်။
ဂိမ်းကအရမ်းအိုမင်းပေမဲ့လူကြိုက်များတာကတော့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားပါတယ်။ လူများသည်ဖိုင်များကိုသာဒေါင်းလုပ်ချသည် download, cs di nuovaဗားရှင်း၊ ဒါပေမယ့်လည်းဟောင်းတယ်။ CS 1.6 CS ဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေဆဲပါ ဒေါင်းလုပ် più လူကြိုက်များ။ ဤနေရာတွင်သင် download လုပ်နိုင်သည် ဒေါင်းလုပ် အခမဲ့ del ရေငွေ့ တန်ပြန်သပိတ်မှောက်။ သင်မရှိသေးပါကယခင်ဆောင်းပါးတွင်ရှင်းပြထားသောရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ဒီမှာနောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ်တစ်မျိုးကို download လုပ်နိုင်တယ် counter-strike XTCS ၁.၆ ။
သင်ကောင်တာဖတ်နိုင်သည် ဒေါင်းလုပ် သပိတ် ၁.၆ ဖော်ပြချက် ပြည့်သော အခမဲ့ del ဤနေရာတွင်ဗားရှင်းအပြည့်။
အမျိုးအစားအမျိုးအစား: မလှုပ်မရှား / ပထမလူသေနတ်သမား
ထုတ်ဝေရေးအဖွဲ့။ အဖွဲ့ XTCS
ဤပစ္စည်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်မည်
ဂိမ်း Mode: ကွန်ယက် (အင်တာနက်၊ ပြည်တွင်းကွန်ယက်၊ တစ်ခုတည်းသောစက်များ)
OS အထောက်အပံ့ - Windows wista / xp / 7/8 / 8.1 / 10
Counter strike 1.6 download, VERSION ပြည့်သော ပုံမှန်မြေပုံများ၊ အသံများနှင့်ပုံစံများသည်ဂိမ်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤတစ်ခုတွင်ထည့်သွင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောအသံသို့မဟုတ်မြေပုံအသစ်များမရှိပါ ဖိုင် di တပ်ဆင်ခြင်း ဒေါင်းလုပ် အခမဲ့ cs ။ Counter strike version များကိုလည်းဤနေရာမှ download ရယူနိုင်သည် https://csdownload.net/counter-strike-1-6-indir/
အကယ်၍ သင်သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းမြေပုံများ၊ အသံများ၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့် attribute များကိုပြောင်းလဲလိုပါကသင်လိုအပ်သောသီးခြားကိုက်ညီသည့်တိကျသောမြေပုံများ၊ အသံများနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
Counter-Strike 1.6: XTCS၊ Xtreme Counter-Strike 1.6၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်ခေတ်အမီဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည် CS 1.6မရ။ ဒါကအံ့သြဖွယ်ဗားရှင်းပါ CS 1.6 ပို၍ လက်တွေ့ကျသောဂရပ်ဖစ်များ၊ အသံများ၊ လက်နက်များ၊ ပစ္စည်းများ၊ ပိုကောင်းသောပုံစံငယ်နှင့်အခြားအဖိုးတန်အပ်ဒိတ်များပါ ၀ င်သည်။
XTCS ကို download လုပ်လိုလျှင် Counter-strike 1.6 အခမဲ့၊ သင် XTCS အခမဲ့ download ကိုနှိပ်ပါ CS 1.6 အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ XTCS setup Counter-strike 1.6 FPS configuration နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် build version တို့ပါဝင်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်း CS 1.6XTCS သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှအကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုအာမခံသည်။
XTCS ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းမှဇာတ်ကောင်များ Counter-Strike 1.6:
နောက်ဆုံးပေါ် sXe ထိုးသွင်း anticoat နှင့်အတူသဟဇာတ
လက်ပုံစံနှင့် texture ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်
Fixed အဟောင်းနှင့်လက်တွေ့အသံများကို installer အသစ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်
ဂိမ်းအင်ဂျင်တွင် bug အမျိုးမျိုးကိုပြောင်းခဲ့သည်
Counter-strike သည်အခမဲ့ download ၁.၆ Warzone:
Counter-strike 1.6Warzone ကို Franchise ပိုင်ရှင် Valve က ၂၀၁၃ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သည် Counter-Strike၎င်းသည်အခြားဗားရှင်းများနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည် Counter-Strike 1.6မရ။ CS: warzone ၏အခြေခံသဘောတရားရှိသည် CS 1.6 ဒါပေမယ့်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ resolution နဲ့ဂရပ်ဖစ်တွေနဲ့ ၎င်းသည်နောက်ထပ်စစ်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသည်။ ဖြန့်ချိပြီးကတည်းကလူတွေကသေနတ်သမားကစားရတာကိုနှစ်သက်ကြတယ် CS 1.6 Warzone ။ ဟိ Counter-Strike 1.6 Warzone ကိုစာမျက်နှာပေါ်ရှိ link မှကျွန်ုပ်တို့၏ website csdownload.net မှ download လုပ်နိုင်ပါသည်။ warzone ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် cs 1.6 warzone exe ဖိုင်ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ CS 1.6 အခမဲ့သင်၏ကွန်ပျူတာသို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိမ့်မည်။ Warzone ပြီးသွားရင် free download လုပ်ပါ CS 1.6 မည်သည့်အမှားများနှင့်ပြဿနာများမရှိဘဲ၎င်းကိုသင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ပေးထားသော link ဖြစ်သည် CS 1.6 Warzone free သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ကြော်ငြာများ၊ game snaps များနှင့်အခြားဖျက်နိုင်သောအပလီကေးရှင်းများမှကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
၏လက္ခဏာများ CS 1.6စစ်နယ်မြေ
အသုံးပြုခြင်း windows 7, 8, 10, XP, Vista;
177 MB အရွယ်အစားတပ်ဆင်ထားသည်
i ထည့်ပါ bot cs 1.6 piùမကြာသေးမီက;
Counter-Strike 1.6 CS: GO mod သည်ဂိမ်း၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် CS 1.6 ကစားသမားတွေဘယ်မှာလဲ CS 1.6 သူတို့ကဂိမ်းကစားခြင်းကိုတွေ့နိုင်တယ် counter-strike: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိုးစစ် ဤအထူး mode သည် CS: GO နှင့်ဆင်တူပြီးအလုပ်လုပ်သည် Counter Strike 1.6မရ။ ၎င်းကို main game မှပုံစံများ၊ မြေပုံများ၊ အသံများ၊ အရေခွံများ၊ spoilers များနှင့် textures များဖြင့်တည်ဆောက်သည် Counter-Strike: မည်သည့်အနိမ့် spec computer တွင်မဆိုအကောင်းဆုံးကြည့်ရှုခံစားမှုကိုပေးနိုင်ရန် GO ကိုသွားပါ။ အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည် CS 1.6 CS: GO သည်ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲသောအရာများဖြစ်သည်။
၏အခမဲ့ download လုပ်ပါ Counter-Strike 1.6 CS: GO ကိုငါတို့ page မှာဒီမှာရနိုင်ပါတယ်။ ဤစာမျက်နှာတွင်တိုက်ရိုက်ပေးသော link မှတဆင့်၎င်းကို download လုပ်နိုင်သည်။ မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း Download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ Counter-Strike 1.6 CS: ငါတို့ website မှာသွားပြီးအဲဒါကိုကလစ်လုပ်ပြီးဒီနေ့မင်းရဲ့ဂိမ်းကိုအခမဲ့ရယူပါ။
CSGO ၏အနည်းဆုံးစနစ်လိုအပ်ချက်များကို download လုပ်ပါ Counter-Strike 1.6:
512 MB Ram မှတ်ဉာဏ်
64 MB ဗွီဒီယို Ram မှတ်ဉာဏ်
ဤ mod တွင်မော်ဒယ်များပါ ၀ င်သည် CS 1.6 CS: GO နှင့်တူအောင်ပြုပြင်ထားသော
ဒီပြုပြင်ထားသော mod တွင်ဂိမ်း၏ Global Offensive version နှင့်တူညီသောအသံများပါရှိသည်။ ရေဒီယို၊ လက်နက်အသံ၊ အသံအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (မြေပုံအသံများစသည်ဖြင့်)
ယခုထုတ်ဝေမှုတွင် CS: GO နှင့်ဆင်တူသောပြုပြင်ထားသောပုံစံလုပ်ထားသောမြေပုံရှိသည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ဂိမ်း၏မူလမြေပုံများနှင့်အတူပါရှိသည် (de_dust2, de_inferno, cs_assault, etc)
ဂိမ်း၏ storylines ကိုလည်းပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအခြေခံအားဖြင့် CS: GO ဗားရှင်းနှင့်ဆင်တူသည်
CS: GO Weapons နှင့် Ammo Purchase Menu
မည်သည့် operating system နှင့်မဆိုအလုပ်လုပ်သည်
Counter-strike သမိုင်းတွင်နာမည်အကြီးဆုံးပထမ ဦး ဆုံးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ရှည်လျား။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးထူးခြားသောဂိမ်းသမိုင်းရှိသည်။ ဇာတ်လမ်းအများစုကိုသင်မသိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် Counter-strikeတစ်ချိန်လုံးကစားခဲ့ဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ကစားသမားတစ် ဦး အနေဖြင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းကိုသိရန်လိုအပ်သည် Counter-strike ဇာတ်ညွှန်းကောင်းများ၊ အချိန်ပြည့်လူကြိုက်အများဆုံး၊ ဒေါင်းလုပ်များနှင့်ကစားခဲ့ဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်လျင်မြန်စွာကူးပြောင်းသွားသည်။ ၎င်းသည် beta ဗားရှင်း ၁၇ ခုကိုယူခဲ့သောကြောင့်ကြည်လင်သောအမှန်တရားဖြစ်သည် Counter-strike ဂိမ်းလောကတွင်လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ရှင်သန်လာခဲ့သည်။ ဂိမ်းဟောင်းတစ်ခုဖြစ်နေသော်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားများနှင့်သန်းပေါင်းများစွာသောလူများသည်၎င်းကိုကစားရင်းနှင့်ပျော်ရွှင်နေဆဲဖြစ်သည် Counter-strike.
အစ del ဂိမ်း:
၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ လွန်ခဲ့သော ၂၁ နှစ်ခန့်က Valve ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် Half-Life ဟုခေါ်သောပထမဆုံးလူပစ်သေနတ်ပစ်ဂိမ်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Valve Corporation သည်ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် Counter-Strikeမရ။ ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာဂိမ်းများကိုထုတ်ဝေသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သောအမေရိကန်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Sierra Studios သည် emita ကိုကြီးမားသောပေါက်ကွဲသံနှင့်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှဂိမ်းကစားသူများသည်ဂိမ်းကိုနှစ်သက်သည်။ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုများသည်ဂိမ်းကစားသူများအကြားအလွန်လျင်မြန်စွာလူကြိုက်များလာခဲ့ပြီးအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးသည်ယင်းပတ် ၀ န်းကျင်မှတိုးတက်လာခဲ့ပြီးပရိုဂရမ်မာများသည်တစ် ဦး ချင်း mods များကိုစတင်လုပ်ဆောင်လာကြသည်။
ကနေဒါပရိုဂရမ်မာ Minh Le နှင့်သူမ၏သူငယ်ချင်း Jess Cliffe တို့ Half-Life mod ၏ beta ဗားရှင်းကိုဖန်တီးသည်။ Counter-Strikeမရ။ Half-Life ၏ပထမဆုံး beta ဗားရှင်းကိုတီထွင်ရန် coding ၏တစ်လခွဲကြာသည်။
Min Le နှင့် Jess Cliffe တို့သည် betas ဖွံ့ဖြိုးရန်ဆက်လက်ရုန်းကန်ခဲ့ပြီး CS အတွက် website တစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင်မြေပုံလေးခုနှင့်လက်နက်ကိုးလက်သာရှိသည် Counter-Strikeသို့သော်နာမည်ကျော်ဆက်တင်ကရှိနေသေးသည်။ လူများသည်အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရန်နှင့်အကြမ်းဖက်ရန်နှစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်ထားသော 5v5 ဂီယာများကိုကစားခဲ့ကြပြီးဤအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့သည်ယနေ့တိုင်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ Counter-Strike ၎င်းသည်ပိုမိုအာရုံစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးလူများသည်ဂိမ်းကိုနှစ်သက်သည်။
လူကြိုက်များလာတာကြောင့်Counter-Strike နှစ်နှစ်ကြာလူထုတည်ဆောက်ထားသော mods များအပြီးတွင် video game developer Valve သည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်ပဉ္စမ beta ကိုဖြန့်ချိပြီးနောက် Le နှင့် Cliffe ကိုငှားရမ်းခဲ့သည်။ Valve သည် Counter-Strike programmer Minh Le နှင့် Jess Cliffe တို့သည် Valve နှင့်စတင်လက်တွဲခဲ့ကြသည်။ Counter-Strike ၂၀၀၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် PC အတွက်နောက်ဆုံးဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းသည်စီးရီး၏တရားဝင်စတင်ခြင်းဖြစ်သည် Counter-Strike.
ပထမအရာရှိကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည် Counter-Strike ၎င်းတွင်နာမည်အကြီးဆုံးမြေပုံနှစ်ခုဖြစ်သော Assault (cs_assault) နှင့် Cobblestone (de_cabble) တို့ရှိခဲ့ပြီးမြေပြင်၌သာကစားခဲ့သည်။ mod တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းတွင်ကြီးမားသောနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုရှိသော်လည်းတရားဝင် PC Counterattack series ကိုဖြန့်ချိပြီးနောက်၎င်းသည်လူအများကြားတွင်များစွာသောခေါက်ဆွဲများအထိ၎င်း၏ကျော်ကြားမှုကိုမြင့်တက်စေခဲ့သည်။
La community di ဖြစ်သည် Counter-Strike လူတွေပိုပိုပြီးကစားလာသည်နှင့်အမျှပိုပိုပြီးကြီးလာသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကစားခဲ့သဖြင့်ကျော်ကြားမှုသည်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ကစားသူအများအပြားသည်ယခင်ကရှိခဲ့သည်၊ သို့သော် Counter-Strike ၎င်းသည်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဂိမ်းထဲသို့ ၀ င်ရန်လွယ်ကူသည်။ သူငယ်ချင်းများ (သို့) သူစိမ်းများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကွန်ပျူတာရှေ့နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်မလိုအပ်ပါ။ လူတွေရနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်ဒါမှမဟုတ်ရက်ပိုင်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကစားရန်လွယ်ကူသော်လည်းကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသောထူးခြားသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောစတိုင်နှင့်စိန်ခေါ်မှုသဘောသဘာဝကြောင့်၎င်းသည် gamers များအကြားရေပန်းစားလာသည်။ ၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ပြုလုပ်ထားသောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖန်တီးခဲ့ဖူးသမျှအလွှမ်းမိုးဆုံး multiplayer ဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာတွင်စက်ပြင်များစွာကိုသင်မြင်နိုင်သည် Counter-Strike အကောင်အထည်ဖော်သည်၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး၎င်း၏ကျော်ကြားမှုမှတဆင့်ဖြန့်ဝေရန်ကူညီသည်။
ဗားရှင်းနှင့် နောက်ဆုံးသတင်းများ di Counter-Strike:
CS ၏မကြုံစဖူးမြင့်တက်မှုနှင့်လူအားဆွဲဆောင်နိုင်မှုအလားအလာသည် developer များအားဤဂိမ်းကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေရန် developer များပိုမိုလုပ်ဆောင်စေခဲ့သည်။ လူတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေဖြစ်လာပြီးပရိုဂရမ်မာတွေကစိတ်ကူးတွေကိုလက်တွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ကြတယ်။ Valve ကော်ပိုရေးရှင်းသည်၎င်း၏ Anti-Cheat (VAC) စနစ်ကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤစနစ်သည်လိမ်လည်ရန် (သို့) hack ရန်မဖြစ်နိုင်သောအရာဖြစ်ပြီးကစားသမားတစ် ဦး ကကြိုးစားလျှင်၎င်းတို့အားချက်ချင်းပိတ်ပင်လိမ့်မည်။ Valve သည်အကြမ်းဖက်သမားများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နင်းရေးအတွက်မြေပုံအသစ်များနှင့်လက်နက်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် Counter-Strike ၂၀၀၃ တွင်ဗားရှင်း ၁.၁
Valve, Ritual Entertainment နှင့် Turtle Rock Studios တို့ကတီထွင်ခဲ့သည် Counter-Strike၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Condition Zero ကို Sierra မှနားထောင်ရန်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် single player နှင့် multiplayer mode များပါ ၀ င်သည်။ ပရိုဂရမ်မာများသည် "The Deleted Scenes" ဟုခေါ်သောတစ်ခုတည်းသောလှုံ့ဆော်မှုကိုလိုက်နာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်လည်းဂရပ်ဖစ်ကိုတိုးတက်စေသော်လည်း၎င်းသည်ညံ့ဖျင်းစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကစားသမားအများစုသည်၎င်းကိုထိုက်တန်စွာမတွေ့ရှိခဲ့ဘဲဗားရှင်းအသစ်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စိတ်မဝင်စားခဲ့ပေ Counter-Strikeမရ။ သူတို့သည်ဂိမ်းအသစ်ကို မကျေနပ်၍ အဟောင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသည် Counter-Strike ကျော်လွန် Counter-Strike: အခြေအနေသုည အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Valve သည် Strike ကဲ့သို့ကောင်တာအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် Counter-Strike: အရင်းအမြစ်eCounter-Strike၂၀၁၀ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိုးစစ်
အကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်နှင့်မွမ်းမံမှုများထောင်ပေါင်းများစွာပြီးသောအခါ Valve သည်ဂိမ်းကိုယနေ့ကဲ့သို့အသွင်ပြောင်းရန်ကူညီခဲ့သည်။ သူတို့ကဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ် Counter-Strike CS ၏အကောင်းဆုံးဗွီဒီယိုဂိမ်းကိုတင်မကဘဲကမ္ဘာပေါ်တွင်နှစ်ရှည်လများအကြိုက်ဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်စေသောပရိသတ်များနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ဆန္ဒများအတိုင်းဖြစ်သည်။ မူလအပြီးနှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ရှိပြီ Counter-Strikeအသက်ရှင်နေဆဲဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများသည် CS ကိုကစားရန်နှစ်သက်ဆဲဖြစ်သည်။ နည်းလမ်းအားလုံး၌၎င်းသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းတို့အကြားပြီးပြည့်စုံသောဟန်ချက်ညီသောကြောင့်ပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တန်ပြန်သပိတ်သည်သင်ယူရန်လွယ်ကူသောကစားနည်းဖြစ်သော်လည်းကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသည်။ နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကစားလိမ့်မယ်။ သတင်းအချက်အလက်အပေါ် Counter-Strike 1.6
သတင်းအချက်အလက်အပေါ် Counter-Strike 1.6:
CS 1.6 သည်အက်ရှင်နှင့်စွန့်စားမှုအပြည့်ရှိသောဒဏ္legendaryာရီဆန်သောပထမဆုံးသေနတ်သမားဖြစ်ပြီးနာမည်အကြီးဆုံးဗားရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Counter-Strikeမရ။ ၎င်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် Valve Corporation မှတီထွင်ခဲ့ပြီး STEAM မှဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သူသည်လူအများကြားတွင်လျင်မြန်စွာကျော်ကြားလာပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသူ၏ပရိသတ်များကိုစုဝေးစေခဲ့သည်။ ၏အသိုင်းအဝိုင်း CS 1.6 တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပိုပြီးကြီးမားလာပြီးလူတွေကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကစားနေကြတယ်
CS သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးနှင့်အကစားဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဖြန့်ချိခဲ့သော်လည်းဤဂိမ်းသည် ESports တွင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်၌ကစားနေဆဲဖြစ်သည်။ သန်းပေါင်းများစွာသောလူများကရှိနေသေးသည် CS 1.6 သူတို့၏ PC တွင်လူထောင်ပေါင်းများစွာသည် web မှအခမဲ့ download လုပ်နေသည်။ ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းနှစ်စဉ်ကျင်းပပါတယ် CS 1.6 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကစားသမားများသည်ဤပွဲများသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာကစားသမားများစွာသည်ကမ္ဘာအနှံ့နာမည်ကျော်ကြားမှုရရှိခဲ့သည်။
ဒါဟာလူကြိုက်အများဆုံးပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သေနတ်သမားအမျိုးအစားဂိမ်းနေဆဲကစားသမားကြောက်မက်ဘွယ်သောကစားသမား join သို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ကစားသမားတန်သို့မဟုတ်ပရိသတ်ဖြစ်လာသည်ရှိရာ။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီသည်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏တာ ၀ န်ကိုပြီးအောင်လုပ်ရမည်။ ၎င်းတို့သည်ဗုံးများထုတ်လုပ်ခြင်း (သို့) ပိတ်ခြင်း (သို့) ဓားစာခံများကိုအကြမ်းဖက်ဝါဒမှကာကွယ်ရန်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရမည်။ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့သည်ဗုံးတစ်လုံးသယ်ဆောင်ပြီးနေရာတစ်နေရာတွင်နေရာချကာဂိမ်းကိုအနိုင်ရရန်မထွက်ခွာမီဗုံးများကိုလက်နက်ဖြုတ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အားတိုက်ခိုက်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့သည်မှာအကြမ်းဖက်မှုကိုတိုက်ဖျက်ခြင်းဖြင့်ဂိမ်းကိုအနိုင်ယူရန်အတွက်ကျောက်တုံးတစ်တုံးမျှမကျန်ရှိသေးပါ။ ဓားစာခံမြေပုံများတွင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးသည်အကြမ်းဖက်သမားအားကိုင်ဆောင်ထားသည့်ဓားစာခံအုပ်စုအားဂိမ်းကိုအနိုင်ယူရန်ကြိုးစားသည်။ အကယ်၍ ဓားစာခံများကိုအောင်မြင်စွာကယ်တင်နိုင်လျှင်၊ သူတို့ကအနိုင်ရရှိပြီးအချိန်ကုန်သွားလျှင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့သည်အနိုင်ရရှိသည်။
ဘာကြောင့်လဲသိလား CS 1.6 သည် gioco CS မှာ download, più လူကြိုက်များ?
ဗားရှင်း CS 1.6 di Counter-Strike ၎င်းသည်ယခင်ဗားရှင်းထက်ထူးခြား။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သောကြောင့်လူကြိုက်များသည် Counter-Strikeမရ။ ဤဗားရှင်း Counter-Strike ၎င်းကိုကစားသမားများ၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သာမန်လူထုအတွက်ပရိုဂရမ်မာများကအထူးပြုလုပ်ထားသည်။ Counter Strike တွင် multiplayer နှင့် single-player modes နှစ်ခုလုံးရှိသည်။ developer များက flashing နည်းဗျူဟာဒိုင်းလွှား၊ Scope Snipers များနှင့် backend upgrade များစွာပါ ၀ င်သောအမှတ်တံဆိပ်ဗားရှင်းအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ကစားသူများသည်ဗားရှင်းအသစ်တွင်ဓားများ၊ သေနတ်များ၊ ခန္ဓာကိုယ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများ၊ စက်သေနတ်များနှင့်ဗုံးရှင်းလင်းရေးပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်ကွဲပြားခြားနားသောအသစ်လက်နက်များရနိုင်သည်။ CS 1.6မရ။ ကစားသမားများသည်ဂိမ်း၏လိုအပ်ချက်များအရကစားခြင်းနှင့်လက်နက်များ ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေရနိုင်သည်။ ဤလက်နက်များသည်စစ်ဆင်ရေးများတွင်သုံးသောစစ်မှန်သောလက်နက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤလက်နက်များသည်အစိုင်အခဲများနှင့်ကစားသူများအားစွဲမက်စေသည်။
ဗားရှင်းအသစ်များ Counter-Strike သူတို့မှာအရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်၊ စံပြပုံစံကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့သွက်လက်တဲ့အသံတွေရှိတယ်။ ၏မြေပုံများ CS 1.6 သူတို့သည်အခြားဂိမ်းဗားရှင်းများထက်အလွန်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးတိုးတက်လာသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ၊CS 1.6 ဆေးများသည်လေးလံသောကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များပါ ၀ င်သောမည်သည့်ကွန်ပျူတာစနစ်မဆိုဂိမ်းကိုလွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Microsoft Windows Versions ဗားရှင်းအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Counter-Strike သူတို့ကသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘ ၀ ပြဿနာတွေကိုမေ့ပစ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေတွေကနေကစားပွဲကမ္ဘာရဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုရွှေ့ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကြားမှာလည်းကျော်ကြားလာခဲ့တယ်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကစားပါ CS 1.6 သူငယ်ချင်းများနှင့်သူစိမ်းများနှင့်အတူအပျက်သဘောဆောင်သောအတွေးများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးလူတို့အားပျော်ရွှင်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဘာသာပြန်ဂိမ်းနှင့်စကားပြောကစားသူများသည်ဒဏ္legendaryာရီဆန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုခံစားရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။
ထို့ကြောင့်၎င်း၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များကြောင့် CS သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လူကြိုက်များမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးသူတို့၏အားလပ်ချိန်များတွင်ဤဂိမ်းကိုကစားရန်နှစ်သက်သည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လုံးဝလုံခြုံသော link ကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ဤနေရာတွင်ရှိသည် CS 1.6 အခမဲ့။